सार्वजनिक रुपमै झापड र जुत्ता खाने नेताः कुन नेताले कहाँ भेटे झापड र जुत्ता? – Butwal 24 News
September 22, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on सार्वजनिक रुपमै झापड र जुत्ता खाने नेताः कुन नेताले कहाँ भेटे झापड र जुत्ता?
बुटवल उपमहानगरका मेयर शिवराज सुवेदीले गएको असोज ४ गते आफ्नै कार्यकर्ताबाट मुक्का खाए। पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्न गएका मेयर सुवेदीमाथि गणेश पंगेनीले मुक्का प्रहार गर्दै हातपात गरे। पहिरोले विस्थापित भएको लामो समयसम्म पनि आफूहरुलाई कुनै उचित व्यवस्थापन नगरेकाले आक्रोशित भएर ती युवाले मेयरमाथि हातपात गरेको थिए।
मेयर सुवेदी नगर प्रहरीको कडा सुरक्षा घेराभित्र थिए। उनलाई नेपाल प्रहरीले पनि सुरक्षा दिइरहेको थियो। तर, रिसको आवेगमा युवाले मेयरमाथि एक मुक्का बजारे। मेयर सुवेदी मात्र होइनन्, कडा सुरक्षा घेराभित्र रहेका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले बेला–बेलामा कार्यकर्ताबाट र कहिलेकाहिँ आम–नागरिकबाट झापड, जुत्ता र मुक्का भेट्ने गरेका छन्।
मुलुकमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनपछि बनेका प्रदेश र स्थानिय तह र त्यसका जनप्रतिनिधिहरूले पनि बेला–बेला सार्वजनिक स्थानमा कुटिने गरेका छन्। कुटाई जुत्ता वा झापड खानु सामान्य कुरा होइन। धेरैले यसलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको नेतृत्वप्रतिको आक्रोशको रुपमा लिने गरेका छन्। हुन पनि कडा सुरक्षा घेराभित्र आफ्नै कार्यकर्ताबाट नेताहरुले यसरी सार्वजनिकरुपमा दुर्व्यवहार भोग्न बाध्य भएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को माग ३ धारा १७ को उपधारा २ अन्तर्गत च(१)मा ‘कुनै पनि व्यक्ति हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा संलग्न हुन पाइने छैन’ भनि उल्लेख गरिएको छ। संविधान अनुसार पनि सार्वजानिक व्यक्ति होस् या कोही कसैलाई पनि हिंसा, दुरुत्साहन सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल कार्य गर्न नहुने उल्लेख हुँदा हुँदै पनि नेतृत्वहरूमाथि साङ्घातिक हमला हुने गरेको छ। त्यसो त फौजदारी कसुर ऐन अन्तर्गत त्यस्तो कसुर गर्नेलाई कानुनी कारवाही त हुन्छ तर, पनि सार्वजनिक व्यक्तिहरूलाई यसले असर गर्दछ।
आज हामी सार्वजनिकरुपमा दुर्व्यवहार भोग्नु परिरहेका केही नेताहरूबारे चर्चा गर्दैछौं।
नेपाली कांग्रेसका वष्ठि नेता रामचन्द्र पौडेल
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि २०५१ सालमा संसदमै जुत्ता प्रहार भएको थियो । तत्कालीन एमालेका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा सदस्य रहेका गोल्छे सार्कीले पौडेलमाथि जुत्ता प्रहार गरेका थिए। तत्कालीन एमालेका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा सदस्य रहेका गोल्छे सार्कीले पौडेलमाथि जुत्ता प्रहार गरेका हुन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विसं २०६९ साल मंसिर २ गते आफ्नै नेतृत्वमा भएको सशस्त्र युद्धमा सहभागी एक लडाकुको परिवार सदस्यबाट झापड खानु परेको थियो । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा माला लगाइदिने भन्दै बाग्लुङका पदम कुँवरले प्रचण्डलाई झापड हानेका थिए । कुँवरले प्रचण्डलाई झापड हान्दा उनको चस्मा नै फुटेको थियो । कुँवरले प्रचण्डलाई झापड हानेपछि आक्रोशित बनेका माओवादी कार्यकर्ताले कुँवरमाथि हातपात गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको कुँवरलाई प्रचण्डले नै धरौटी वापतको रकम उपलब्ध गराई हिरासतमुक्त गरेका थिए।
त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डलाई २०७६ फागुन १८ गते जुत्ता प्रहार गरिएको थियो। तत्कालीन नेकपा पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले भरतमोहन अधिकारीको प्रथम स्मृतिसभालाई सम्बोधन गरेपश्चात उनीमाथि राष्ट्रियसभा गृहमा जुत्ता प्रहार भएको थियो। प्रचण्डमाथि जुत्ता प्रहार गर्ने व्यक्ति जुम्लाका २२ वर्षीय रतन तिरुवा थिए। उनका बाबु मनु तिरुवाले सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएकाले त्यही आवेगमा उनले प्रचण्डलाई जुत्ता प्रहार गरेको रतनले प्रहरीसँगको बयानमा बताएका थिए। उनलाई पनि प्रचण्डले माफी दिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता, झलनाथ खनाल
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा झापड खानु पर्यो। नेकपा एमालेमै रहँदा २०६७ माघको पहिलो हप्ता सुनसरीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा नेता खनालले स्थानीय देवीप्रसाद रेग्मीको झापड खाएका थिए। पार्टी प्रवेश गर्न लामबद्ध बनेका कार्यकर्ताहरुसँगै लामबद्ध भएर रेग्मी खनाल भएको ठाउँमा पुगेका थिए। नेता खनालले रेग्मीसँग हात मिलाएर उनलाई टीका लगाइदिन खोजेका थिए। तर, रेग्मीले टीका लगाउन इन्कार गरे। त्यसपछि नेता खनालले दुवै हात तल राखेको मौका पारी रेग्मीले नेता खनाललाई झापड बजारे। रेग्मीले नेता खनाललाई झापड हान्दा उनको चश्मा भुईंमा खसेको थियो भने नाकमा सामान्य चोट लागेको थियो। तर, नेता झलनाथ खनालले पनि आफूलाई झापड हान्ने देवीप्रसाद रेग्मीलाई माफी गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष, डा. बाबुराम भट्टराई
२०७३ साल मंसिर २२ गते जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई पनि पोखरामा जुत्ता प्रहार गरिएको थियो। नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक रहँदा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा आफूनिकट विद्यार्थी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई भट्टराईले सम्बोधन गर्दै थिए । सम्बोधनका क्रममा कार्यक्रममा उपस्थित कैलालीका ३४ वर्षीय सञ्जिव भट्टराईले डाक्टर भट्टराईलाई कालोझण्डा देखाउनुका साथै जुत्ता प्रहार पनि गरेका थिए । त्यसो त सञ्जिवले प्रहार गरेको जुत्ता मञ्चसम्म भने पुगेन। त्यसपछि जुत्ता प्रहार गर्ने भट्टराईलाई पार्टीका विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताहरुले आक्रमण गरेका थिए । तर, प्रहरीले भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनी जोगिएका थिए। बाबुराम भट्टराईले पनि सञ्जीव भट्टराईलाई प्रहरी नियन्त्रणमा नराख्न र चर्चाको विषय नबनाउन आग्रह गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका नेता, झक्कु सुवेदी
माओवादी केन्द्रका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले २०६९ जेठ २ गते झापड खानुपर्यो। संविधानसभाको बैठक सकेर घर फर्कंदै गर्दा तीनकुने स्थित एक चिया पसलेले चिया खुवाइसकेपछि २ झापड हानेका थिए। सोही समय गोर्खाको गाईखुर–८ का प्रेमराज देवकोटाले सुवेदीलाई बोलाएर संविधान कहिले बनाउँछौ, भनेर सोधेका थिए। सुवेदीले ‘हामी संविधान बनाउँदैछौं भनेपछि देवकोटाले पनि सुवेदीको गालामा दुई झापड हानेका थिए। त्यसबेला उनीहरूले संविधान बनाउन प्रतिनिधि पठाएको तर, आफ्नो काम पुरा नगरेको भन्दै आक्रोसमा हात छोडेको प्रहरीसँग भनेका थिए। सुवेदीले पनि उनीहरूलाई माफी दिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाले पनि आफ्नै कार्यकर्ताको आक्रोश सहनुपर्यो। २०६९ साल असोज १३ गते काठमाडौंको कपनमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा उपस्थित भएका तत्कालिन पार्टी सभापति सुशील कोइरालामाथि कांग्रेसकै कार्यकर्ता प्रवेश बस्नेतले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। तथापि नेता कोइराला आक्रमण गर्ने प्रवेश प्रति उदार देखिए। कोइरालाले ‘आक्रमणकारी’लाई आफ्नै पहलमा रिहा गराए। त्यसबेला सुशील कोइरालामाथिको आक्रमणका विषयमा कांग्रेसले छानविन समिति गठन गरे पनि पछि आक्रमणकारी बस्नेतलाई कोइरालाले माफी दिएका थिए । तथापि बस्नेतलाई भने कांग्रेस कार्यकर्ताले आक्रमण गरी घाइते बनाएका थिए।
नेपाली कांग्रेस महामन्त्री, पूर्णबहादुर खड्का
पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई एक महिला सभासद्ले सार्वजनिक कार्यक्रममै चप्पल बर्साइन्। ०६५ जेठ १५ गते एमालेकी सभासद् कमला शर्माले खड्कामाथि चप्पल प्रहार गरिन्। उनले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनताका एमाले उम्मेदवार ऋषिराज अधिकारीको हत्याको रिस पोख्दै खड्कालाई चप्पल हानेकी थिइन् ।